किन जापानीहरु धेरै जसो मास्क लगाउछन? ७ कारण | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > किन जापानीहरु धेरै जसो मास्क लगाउछन? ७ कारणहरु
धेरै जसो जापानीहरु जहिलेपनि सर्जिकल मास्क लगाउछन। जापान आउनेहरुको पहिलो पहिलो जिज्ञाशा पनि यहि कुरा हुन सक्छ। म आफै पनि जापान आउदा अचम्ममा परेको थिए। नेपालमा त प्रदुषण धेरै थियो, त्यो माथि धुवा धुलो, मास्क लगाउने थुप्रै जायज कारण थिए। जापानमा त सफा बाटो, चिल्ला गाडी, धुवा धुलो नभएकोले बायु प्रदुषण नि थिएन। त्यहि पनि जापानीहरु उल्लेख्य मात्रामा मास्क लगाउने किन होला ? आज हामी किन जापानीहरु माझ सर्जिकल मास्क यति लोकप्रिय छ भन्ने कुरा केलाउन जादै छौ। के हुन् ति कारण ? जानी राखौ है।
१. बिरामी भएकोले
जापानीहरु किन थोरै बिरामी हुने बित्तिकै मास्क लगाउन थाली हाल्छन। उनिहरु फ्लु लाग्दा मात्र नभएर सानो तिनो रुघाखोकिमा पनि मास्क लगाउछन। हुन पनि यो बेसिक र महत्वपूर्ण कारण हो। यदि हजुर बिरामी हुनु हुन्छ भने हजुरले मास्क लगाउनु पर्ने कुरा “आतारिमाए ” (शिष्टता) जस्तै हो। यसो गर्नाले अरुलाई रोग सर्ने चान्स कम हुन जान्छ। हजुरलाई रुघा लागेको छ र हजुरले मास्क लगाउनु भएन भने जापानीहरु त्यसलाई असभ्य मान्छन। सार्बजनिक स्थलमा खोक्दै वा हाछ्यु गर्दै हुनु हुन्छ भने मास्क लगाउन नबिर्सिनु होस्।
२. बिरामी नहुनको लागि।
बिरामी हुदा मास्क लगाउनु शिष्टता भएता पनि धेरैले लगाउदैन। अझ बिदेशीहरु को संख्या बढ्दै गएको र बिदेशीहरु सानोतिनो रुघा खोकीमा मास्क नलगाउने सोच जापानीहरुको छ। त्यो माथि जापानको प्याक ट्रेनमा चढ्दा मानिसहरु एक अर्का संग टासिएर यात्रा गर्छन, जस कारणले रोग सर्ने चान्स धेरै हुन्छ। त्यसैले जापानीहरु किटाणु बाट बच्न मास्क लगाउछन। ट्रेन मात्र नभएर जापानको केहि ठाउँहरु पनि उत्तिनै मान्छेको भिड हुनाले मास्क लगाउनु जरुरि देखिन्छ।
जापानमा बस्ने हजुरले पक्कै पनि काफुन्स्यो भन्ने शब्द सुन्नु भएको होला। बर्षेनी बसन्त ऋतु सुरु भएपछि धेरै जापानीहरुमा आखा चिलाउने, हाछ्यु आउने, नाक बाट पानी बग्ने जस्ता समस्या देखा पर्छ। यो काफुन्स्यो भन्ने रोग हो। अंग्रेजीमा यसलाई हे फिभर पनि भनिन्छ। गर्मि सुरु भए संगै रुखहरुले पोलेन बनाउन सुरु गर्छन। यहि पोलेनको एलर्जी भएका जापनीहरुलाई यो समस्या देखिन्छ। त्यसैले काफुन्स्यो नहोस भनेर जापानीहरु बाहिर हिड्दा मास्क लगाउछन। काफुन्स्यो जापानको निकै बिकराल समस्या हो। यसबाट बच्न मास्क मात्र नभएर अनेकौ औषधिहरु पाईन्छ। मौसम विज्ञहरुले हजुर बस्ने क्षेत्रमा कति पोलेन छ भन्ने पनि जानकारी गराउछन। यसबाट पनि काफुन्स्योको समस्या जापानमा भयानक छ भन्ने थाहा हुन्छ।
४.खाना सम्बन्धित काम
जापानीहरु सबै थोक सफा र हाइजिनिक चाहन्छन। उनीहरु आफ़्नुले प्रयोग गर्ने कुरामा संक्रमण भएको मन पराउदैनन। त्यसैले खाना बनाउने फ्याक्ट्री, रेस्टुराण्ट वा अफिस र स्कुलको खाजा खाने क्यान्टिनहरुमा पनि मास्कको प्रयोग हुन्छ। जसरि हातमा ग्ल्बस लगाएर खाना छुनु हाइजिनिक हो, मास्क लगाएर त्यस्तो स्थलमा काम गर्नु सफा मानिन्छ। “एसे खानरी” यानिकि फुड एंड हाईजिनमा जापान निकै संबेदनशिल छ।
५. वायु प्रदुषण
हजुरहरुलाई मैले सुरुमै जापानमा वायु प्रदुषण छैन भनेको हुनाले यो कारण किन लेखेको भन्ने प्रश्न आयो होला। हो जापान देश आफैमा वायु प्रदुषण को समस्या छैन। तर छिमेकी राष्ट्र चीन बाट आउने प्रदुषित हावाले गर्दा जापानीहरु अझ संबेदनशील बनेका छन्। उपचार भन्दा साबधानी अपनाएर रोकथाम गर्नमा बढी विस्वाश गर्ने जापानी यहि कारणले मास्क लगाएर प्रदुषित हावा बाट बच्न खोज्छन। PM २.५ बाट बच्न भनेर जापानी कम्पनीले विशेष प्रकारको मास्कनै बनाउने गरेका छन।
६. जाडोमा चिसो र ड्राई एअर बाट बच्न
जापानको जाडोमा हावामा निकै कम मात्रामा मोइस्चर हुने गर्दछ। यसले गर्दा ओठ फुट्ने, स्किन ड्राई देखाउने जस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन। मास्क लगाउदा फेस एरिया चिसो हावा बाट बच्छ नै सासले गर्दा हजुरको ओठ पनि मोइस्ट रहन्छ। लिप बाम त छदैछ, एक चोटी मास्क लगाएर हेर्नुस हजुरको ओठ जाडोमा फुट्न बाट बच्छ।
७. आफ्नो अनुहार लुकाउन
कोहि कोहि जापानी महिलाहरु मेकअप गर्न नभ्याएको दिन मास्कले आफ्नो फेस ढाक्ने गर्दछन। जापानी महिलाहरु मेकअपको पारखी हुन्छन। उनीहरु सानै उमेर देखि बेसिक मेकअप गर्ने हुनाले, मेकअप बिना आफुमा केहि गर्न कन्फिडेन्स नहुने बताउछन। त्यसैले कहिले काही अल्छी लागेको दिन मेकअप नगरी कतै निक्लिनु पर्दा मास्कको साहयता लिन्छन। केटाहरुमा भने दारी नकाटेको दिन मास्क लगाएर काममा जाने देखिन्छ। कोहि कोहि जापानीहरु प्याक ट्रेनमा चढ्दा आफ्नो सास गनाहउने पिरले मास्क लगाउछन भने कोहि कोहि आफुलाई अर्काको सास वा चुरोटको गन्ध नआओस भनेर लगाउने हुन्छन।